Ampidiro ny telefaona antitra an-tariby fiara an-tariby telefaona an-tariby telefaona an-tranomaizina fonja JWAT139 ho an'ny seranam-piaramanidina-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2021-08-10 HITS: 1
Ampahafantaro ny antique style telephone auto dial public phone digital phones analog wall phone for airport JWAT139
Ningbo Joiwo's vandal proof industrial auto dial emergency telephone JWAT139 dia varotra malaza sy mafana eny an-tsena. Ny endrik'ity modely ity dia lamaody modely noforoninay.
Ny telefaona vy tsy misy fangarony dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany toy ny any amin'ny fonja, hopitaly, rig solika, lampihazo, efitrano fandraisam-bahiny, seranam-piaramanidina, efitrano fanaraha-maso, seranan-tsambo, sekoly, zavamaniry, vavahady sy fidirana, telefaona PREA, na efitrano fiandrasana sns.
Stanless steel fitaovana, miaraka amin'ny IP65 tsy tantera-drano kilasy fiarovana. This wall mounted phone designed to dial a preprogrammed SOS number when the handset is lifted off-hook. Dikan-teny analogy mahazatra na kinova VOIP SIP na kinova GSM Azo ampiasaina ny mpanamory inductive toy ny fenitra ho an'ny sofina henjana. Ity telefaona manohitra ny fanimbana olona ity dia azo ampifandraisina amin'ny ankamaroan'ny rafitra PABX, PBX, PAX na IP PABX
8. Fiarovana porofo IP65.